ရွှေမြန်မာအတွက် အသိနဲ့သတိ: ၃ ဘာသာ ညီနောင်မှပေးသော အသိနှင့်သတိတရား
ခုတလော အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဘာသာရေးကို အခြေခံပြီး ပုတ်ခတ်ပြောဆိုနေကြတာတွေ မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါဟာအင်မတန်မှ အရုပ်ဆိုးအကြည်းတန်စေပါတယ်..။ ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာဆိုင်ရာတွေမှာ သူ့ခံယူချက် သူ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ မြတ်နိုးကိုးကွယ်နေကြတာတွေ ရှိကြပါတယ်။ ကိုယ့်ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကို ထိပါးပုတ်ခတ်လာတာတွေကို လက်သင့်ခံလို့မရသလို.. အခြားဘာသာတွေကို ပုတ်ခတ်စော်ကားမှု ပြုနေတာကိုလည်း အားပေးအားမြောက်ပြုဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ အဓိကကတော့. ကိုယ်ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်သာသနာရဲ့တန်ဖိုးကို မြှင့်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်.. မိမိကိုယ်တိုင်ပဲ မြင့်သထက်မြင့်လာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသလို.. နိမ့်ကျအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း မိမိကိုယ်တိုင်ပဲ နိမ့်ကျသထက် နိမ့်ကျအောင် လုပ်နေသလိုတွေ ဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုတာ သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါအဓိကအကြောင်းရင်းပါ။ အချို့တွေက ကိုယ့်သာသနာကိုထိလာရင် အရုပ်ဆိုးအကြည်းတန်စေတဲ့ စကားတွေနဲ့ ပြန်လည်ချေပတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ သာသနာကို ချစ်နေသလိုလို.. ကာကွယ်နေသလိုလိုနဲ့ နိမ့်ကျသည်ထက် နိမ့်ကျအောင် လုပ်နေတာနဲ့ တူပါတယ်။ ဒါကိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့ အဓိကသိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ။ ဘုရားရဲ့အဆုံးမအောက်မှာ ဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမစကားတွေနဲ့ လိုက်နာကျင့်ကြံနေကြတဲ့သူတွေလို့ ပြောမယ်ဆိုရင် ဘုရားရှင်ဟာ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ လက်ဦးဆရာလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီတော့.. ကိုယ့်ရဲ့ဆရာရဲ့အဆုံးမတွေဟာ ဘာတွေလဲ.. ဘယ်လိုတွေ သင်ခဲ့လဲ.. ဘယ်လိုတွေ နေထိုင်ကျင့်ကြံဖို့ သင်ခဲ့လဲ ဆိုတာတွေနဲ့ နေထိုင်ပြုမူပြီး လိုက်နာကျင့်ကြံတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘုရားရှင် လက်ထက်တော်အခါတုန်းက.. ဘုရားရှင်ကို ထိပါးပုတ်ခတ်ယုံမျှ မကပါဘူးနော်.. အမျိုးမျိုး ဆဲရေးတိုင်းထွာတာတွေ.. အမျိုးမျိုး လုပ်ကြံသတ်ဖျတ်တာတွေ များစွာပါပဲ.. အဲ့ဒီ့များစွာတွေထဲမှာ ဘုရားရှင် ဘယ်လိုသာသနာပြုခဲ့သလဲ.. ဘယ်လိုမျိုး ပြုပြင်ဆုံးမပေးခဲ့သလဲ ဆိုတာလေးတွေကို မှတ်သားနှလုံးသွင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာ သူ့အပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေ.. ဝေဖန်ပုတ်ခတ်မှုတွေ.. လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုတွေကို ဒီလိုမျိုး အကြည်းတန်စေတဲ့ စကားတွေနဲ့ ပြန်လည် ချေပရမယ်လို့များ ဟောပြဆုံးမခဲ့ပါသလား.. ဒီလိုထိပါးပုတ်ခတ်လာမှုတွေကို ဒီလိုပဲ မကြားဝင့်မနာသာ စကားတွေနဲ့ ပုတ်ခတ်ပြောဆိုပြစ်ရမယ်လို့များ ဆုံးမထားခဲ့ပါသလား။
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာ ယုတ်ညံ့တဲ့စကားမျိုးတွေ ပြောဖို့နေနေသာသာ.. နှုတ်ကနေ လိမ်လည်ပြောဆိုမှုမျိုးကို တစ်ခွန်းတစ်ပါဒမျှ မပြုမှုခဲ့တဲ့အတွက် သုဂတ ဂုဏ်တော်နဲ့ ရှိခိုးကြည်ညို အပူဇော် ခံထိုက်နေတာပါ။ ဒီတော့.. ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှန်ရင်.. အားလုံးဟာ ဘုရားရှင်ရဲ့ တပည့်သားတွေပါပဲ.. ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမအောက်မှာ ရှင်သန်နေထိုင်တဲ့သူတွေဟာ ဒီလိုမျိုး နိမ့်ကျနေတဲ့စကားတွေနဲ့ ပြန်လည်ပုတ်ခတ်နေမယ်ဆိုရင်.. ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးမတွေကိုပါ နိမ့်ကျနေတယ်လို့ ပြောနေတာနဲ့ တူနေပါတယ်။ ဒီတော့ တခြားသူတွေ ဘယ်လောက်ရိုင်းရိုင်း တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ မရိုင်းဖို့လိုတယ်.. တခြားသူတွေဘယ်လောက် ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်.. တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ မပုတ်ခတ်ဖို့လိုတယ် ဆိုတာလေး ပြောချင်မိပါတယ်။
ပုတ်ခတ်တဲ့သူတွေကို တဖက်ကပြန်ပြီး တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် သနားဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေလို့ပဲ မြင်မိပါတယ်။ ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အခါတုန်းက ဘုရားရှင်ကို အမျိုးမျိုး လုပ်ကြံစွပ်စွဲပုတ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ဒေ၀ဒတ္တ၊ ကိုယ်ဝန်ဟန်ဆောင်ပြီး စွပ်စွဲတဲ့ စိဉ္စမာနတို့လိုမျိုး အခြားအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ.. တကယ်တော့ သနားစရာတွေပါပဲ။ အတိတ်ကံရဲ့အကျိုးပေးတွေကိုက ဘုရားရဲ့အဆုံးမနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး အတိုက်အခံလုပ်ဖို့ကံတွေ ပါလာခဲ့ရတာပါ။ “ပျက်စီးချိန်တန်လာလျှင် မည်သူကပင် သတိပေးပြောဆို တားမြစ် ဆုံးမပါသော်လည်း နားမ၀င်ဘဲ မိမိလုပ်သမျှ အပြုအမူ အနေအထိုင် အပြောအဆိုများကိုသာ အမှန်ထင်နေတတ်၏” ဆိုတဲ့ အဆုံးမအတိုင်းလို့ပဲ နှလုံးသွင်းရမှာပါပဲ။ “မောဟအမှောင် အားကြီးလာလျှင် အမေပြောလည်းမရ၊ အဖေပြောလည်းမရ၊ နောက်ဆုံး ဘုရားပြောသော်လည်း ရမည်မဟုတ်ပေ” ဆိုတဲ့ အတိုင်းပါပဲ.. ဘယ်လောက်ကြီးပဲ ကြည်ညိုထိုက်တဲ့ဂုဏ်တွေ.. ရိုသေလေးစားထိုက်တဲ့ဂုဏ်တွေ ရှိနေပါစေ.. ဘယ်လောက်ကြီးပဲ ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေ ပြောပြပြီးဆုံးမနေပါစေ.. မောဟအမှောင် အားကြီးလာရင်တော့ ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှ မကယ်နိုင်ပါဘူး..။ သူ့လမ်းကြောင်းသူ လျောက်နေတယ်လို့ပဲ နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမှာပါ။ ဒါကိုမှ ကိုယ်ကသွားပြီး မကြည်ညိုရကောင်းလား.. စော်ကားနေရတာလား ဆိုရင်တော့ သူ့ကိုအမှီပြုပြီး ကိုယ်ပါ အကုသိုလ် များစေနိုင်ပါတယ်။
ဆရာတော်တစ်ပါးဟောပြဆုံးမပေးတာလေး မှတ်သားမိပါတယ်.. “လူတစ်ယောက်နဲ့ ပြိုင်ပြီး ငြင်းဆိုပြောဆိုနေတာတွေ.. ဆဲရေးတိုင်းထွာပုတ်ခတ်နေတာတွေဟာ ကိုယ့်အဆင့်ကို သူနဲ့တန်းတူမညီ ညီအောင် လုပ်နေတာနဲ့ တူတယ်” ဆိုတဲ့ ဆုံးမစကားလေးပါ။ သူရိုင်းတိုင်း လိုက်ရိုင်းရရင် ကိုယ်ပါ လူရိုင်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အဆုံးမအထိန်းကွပ် မရှိတဲ့ ဘာသာမဟုတ်ပါဘူး.. ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမအောက်မှာ နေထိုင်ကျင့်ကြံနေကြတဲ့ ဘာသာဝင်တွေပါ။ ဒီတော့ ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးမတွေကို မှန်ကန်ကြောင်း ပြချင်ရင်.. အဲ့အဆုံးမတွေကို လိုက်နာကျင့်ကြံနေတဲ့သူတွေဟာ ဘယ်လောက်ထိ အဆုံးမအတိုင်း နေထိုင်နိုင်သလဲဆိုတာနဲ့ပဲ ဖော်ကျူးရမှာပါ။ ငါတို့အဆုံးမတွေက မှန်တယ်လို့ အော်နေစရာမလိုပါဘူး.. မှန်တာနဲ့ထိုက်တန်နိုင်အောင် နေထိုင်ပြနိုင်ဖို့ဟာ ပိုပြီး အရေးမကြီးပေဘူးလား..။ အဲ့ဒါဟာ အဓိကပါပဲ..။
နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့.. ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ဆုံးမခဲ့တဲ့.. “ရဟန်းတို့… သူတစ်ပါးတို့သည် ငါ၏ အပြစ်ကိုဖြစ်စေ၊ တရား၏အပြစ်ကို ဖြစ်စေ၊ သံဃာ၏ အပြစ်ကို ဖြစ်စေ ပြောကြရာ၌ ဤစကားသည် ဤအကြောင်းကြောင့်လည်း မဟုတ်၊ ဤအကြောင်းကြောင့်ကြောင်း မမှန်၊ စင်စစ်အားဖြင့် ဤအပြစ်သည် ငါတို့၌ ထင်ရှားမရှိဟု မဟုတ်သည်ကို မဟုတ်သည့် အတိုင်း သင်တို့ ဖြေရှင်းရမည်” ဆိုတဲ့ အဆုံးမလေးပါ။ ဒီတော့ ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမအတိုင်း ပြန်လည်စဉ်းစားတွေးခေါ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးရမယ့်သူ.. ဟောပြဆုံးမပေးရမယ့်သူဟာ ကိုယ်ပြောဆို ရှင်းလင်းပြတဲ့အမှန်တရားကို လက်သင့်ခံနိုင်တဲ့ဥာဏ်မျိုး ရှိတဲ့သူလား.. ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် သူ့ရဲ့အမြင်တွေ အတွေးတွေ ပြောင်းလဲသွားနိုင်မှာလား ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဦးစွာစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုတာလေးပါ။ ကျွန်တော်ပြောတဲ့အထဲမှာ ဘုရားရဲ့အဆုံးမတွေကို ဒီအတိုင်း ပြီးစလွယ် ဘယ်သူစော်ကားနေနေ လက်ပိုက်ကြည့်နေရမယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးနော်.. ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ လက်ခံနိုင်တဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ ဘုရားရှင် အဆုံးမအတိုင်း ပြောပြဆုံးမပေးပါ.. လက်မခံနိုင်တဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ ဦးစွာစဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးမှ ပြောဆိုပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ..။
ဒီအကြောင်းရာလေးကို ရေးရတာဟာ ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှ ပုတ်ခတ်လိုပြီး ပြောလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုကို သတိထားပြီး လုပ်ကိုင်ပြောဆိုစေချင်တဲ့ သဘောလေးပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ သာသနာဟာ သူများပါးစပ်မှာတင် လမ်းဆုံးသွားမယ့်ဘာသာမျိုး မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိစေချင်တာပါ။ သူများ နှိမ့်ချတိုင်းလည်း မနိမ့်ကျနိုင်သလို.. သူများ ချီးမွမ်းတိုင်းလည်း သဘောကျနေရမယ့်ဘာသာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ရဲ့ နှုတ်ကထွက်လိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်း.. ရေးသားလိုက်တဲ့ စာတစ်ကြောင်းဟာ ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမတွေနဲ့ မဆန့်ကျင်နေဖို့ အဓိကလိုအပ်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးမနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး လုပ်ကိုင်ပြောဆိုနေမယ့်အစား ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်ဖူးလို့ ပြောလိုက်တာဟာ ပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့စကား.. ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့ အရေးသားတွေဟာ ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးမတွေကို ဖျက်ဆီးစော်ကားရာ ရောက်နေပါတယ်..။ ဒါ့ကြောင့် ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမတွေကို မိမိကိုယ်တိုင် ဖျက်ဆီးနေတဲ့သူမျိုး မဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြပါလို့ အဓိက မှာလိုပါတယ်..။ ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာအတွက် ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမတွေကို လိုက်နာကျင့်ကြံခြင်းဖြင့် မိမိရဲ့ဘာသာသာသနာကို စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်..။ ကိုယ့်ကြောင့် ကိုယ့်သာသနာ… မနိမ့်ကျပါစေနဲ့…။
Written by Bone layy. Copy from myanmarchat.org
မှတ်ချက် :ကိုယ့်ဘာသာထဲက လူက သူများ ဘာသာသွားစော်ကားတဲ့အခါ နှတ်ဆိတ်နေပြီး သူများက ကိုယ့်ဘာသာထိခိုက်စော်ကားလာတော့မှ စွေ့စွေ့ခုန်အောင် စိတ်ဆိုး ဒေါသ ဖြစ်မဲ့အစား ဖြောင့်မတ်သူလူကြီးပီပီ သူတပါးကိုမစော်ကားဘို့၊ မမိုက်ရိုင်းဘို့ တရားနဲ့ဖြောင်းဖြရမယ်။ သူတို့မိုက်ရိုင်းမှုဟာ ကိုယ့်ဘာသာကိုနိမ့်ကျစေတဲ့အတွက် ကန့်ကွက်ရမယ်။ လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်က ကုလား ကုလား၊ တရုတ်ဘိန်းစား၊ ကရင် ဘာညာ ပြောနေရင်နောက်လိုက်လူငယ်တွေကပိုဆိုး။ လက်ရှိဒီလင့်ခ်တွေမှာပဲကြည့် http://www.anti786.blogspot.com/, http://myanmartruthers.blogspot.com/, http://antiallah.blogspot.com/, http://linshaallah.blogspot.com/, http://islamsucks.worldpress.com/
လူတိုင်းမှာကိုယ် ယုံကြည်ရာ ကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ သူများမြတ်နိုးကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘုရား၊ ကျမ်းဂံ နဲ့သူတော်စဉ်တွေကို ပုတ်ခတ်စော်ကားနေတာဟာ စော်ကားသူတွေရဲ့ အလွန်တရာမှ သဘောထားသေးသိမ်မှု၊ အရိုင်းခေတ်နောက်ပြန်ပြေးနေတာဖော်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ မိစ္ဆာကောင်တွေရဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်။ လူဆိုတာကိုယ်ချင်းစာနာမှုရှိရမယ်။
အထက်ကလင့်ခ်တွေ မီးမွှေးလိုက်တာ အွန်လိုင်းမှာဘာသာရေးပုတ်ခတ်ရေးသားတဲ့ဘလော့တွေ တိုးသထက်တိုးလာတယ်။ Cbox တွေမှာလည်းအလွန်အောက်တန်းကျပက်စက်စွာရေးကြတာတွေဟာ စိတ်မကောင်းစရာ လူ့အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျချင်းတွေပဲ။
ဘာသာတိုင်းမှာ အဖျက်သမား မိစ္ဆာကောင်တွေရှိတယ် သူ့တို့ဖျက်ချင်တိုင်းလည်းမအောင်မြင်ဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ထိ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ မူဆလင်မ်၊ ခရိယာန်၊ ဟင်ဒူနဲ့ အခြားဘာသာတွေတည်တန့်ခိုင်မြဲနေတာပေါ့။ ဆန့်ကျင်ဖျက်စီးသူတွေသာသေသွားမယ်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ယုတ်မာမှုနဲ့ သူ့ဘာသာ၊ သူ့မိဘ၊ သူ့ဆရာ သိက္ခါကိုယ်တိုင်ချနေခြင်းသာဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာကိုးကွယ်နေတဲ့ဘာသာတိုင်းဟာ တိုင်းတစ်ပါသားတို့ ယူလာတဲ့ဘာသာတွေဖြစ်တယ်။ ကျမ်းဂံအသီးသီးဟာလည်း အခြားဘာသာကိုမြန်မာလိုထပ်ဆင့်ဘာသာပြန်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ ဘာသာပြန်မှာ မူလကျမ်းဂံနဲ့လွဲမှားမှု ပိုတာ လိုတာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ အဲဒီအားနည်းချက်တွေရှာပြီးဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပုတ်ခတ်နေကြမယ်ဆိုရင် ဒီတိုင်းပြည်တိုးတက်ဘို့မရှိတော့ဘူး။ သူများနိုင်ငံမှာပဲကျွန်ဆက်ခံကြပေရော့။
လုံခြုံငြိမ်းချမ်းပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ကို ထူထောင်မယ်ဆိုရင် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ရဲ့  လက်တွေ့ ကျင့်စဉ်အရ လူအမျိုးမျိုး၊ ဘာသာတရားအမျိုးမျိုး၊ ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုး၊ ခံယူချက်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့သူတွေရဲ့  ခံစား ချက်တွေကို နားလည်ပေးခြင်း၊သူတို့ရဲ့  ရပိုင်ခွင့်တွေကို ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ပေးခြင်း၊ ဘက်မလိုက်ခြင်း၊ အမှန်တရားနဲ့ တရား မျှတမှုကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လိုအပ်ပါက ကိုယ်က အနစ်နာခံခြင်း၊ သူတစ်ပါးရဲ့  အကျည်းတန်မှုတွေကို ဖြည့်ဆည်း ပေးပြီး လောကကြီးကိုအလှဆင်ခြင်း (အီဟ်စါန်)စတဲ့ တရားတွေရှိဖို့လိုပါတယ်။
ဒါမှသာ အရည်အသွေးအမျိုးမျိုးရှိနေကြတဲ့ သူတွေရဲ စွမ်းရည်တွေ ကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း (Collective Effort)ဆိုတာ ပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာ မှာ ဦးဆောင်သူတွေဟာ IQ ရော EQ ပါ မြင့်မားဖို့လိုပါတယ်။ တစ်နည်းပြောရရင် ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးမြင့်မား ဖို့လိုသလို ကိုယ့်ရဲ့  ခံစားချက်ကိုဖြစ်စေ၊ သူတစ်ပါးရဲ့  ခံစားချက်ကိုဖြစ်စေ၊ နားလည်တတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အခက်အခဲ၊ အကြပ်အတည်းတွေ၊ ဆန့်ကျင်မှုတွေကြုံကြိုက်ရင်လည်း ဆွဗရ်ကြံ့  ခိုင်ခြင်း တရားထားပြီး ဖြေရှင်း တတ်ဖုိ့လိုပါတယ်။ သူတစ်ပါးကို ရန်လိုမုန်းတီးစိတ်နဲ့ အမြဲမြင်နေလို့မရပါဘူး။
ကိုယ့်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေရဲ့ နှလုံးသားကို ဘယ်လိုဖြေသိမ့်မှုတွေပေးနိုင်မလဲဆိုတာက အဓိက ကျပါတယ်။ နှလုံးသားရဲ့
ခံစားချက်တွေဆို တာ အပြောင်းအလဲ ရှိတတ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းကိုကြည့်ရင် ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့  လွတ်လပ်ရေးအတွက်
တိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့အခါ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ခံ ယူချက်ပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ပါဝင်ခဲ့ကြလို့ အောင်မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်
လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အခါ အဲဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (Collective Effort) သဘောတရားကို မထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် လွတ်လပ်ရေး ရဲ့အနှစ်သာရကို ပြည့်ဝစွာခံစားနိုင်စွမ်းမရှိတာကို တွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အနှိုင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာ မြတ်အလ္လာဟ်က ကမ္ဘာဂြိုဟ်မှာ မျိုးနွယ်စုတွေ၊ လူမျိုးတွေ မတူခြင်းဟာ အပြန် အလှန် အသိအမှတ်ပြုကြစေဖို့ဖြစ်တယ်။
Copy from Myanmar Muslim Association.
မှတ်ချက် : မူဆလင်မ်တွေအနေနဲ့လည်း မြန်မာပြည်မှာမွေးကတည်းကသေတဲ့အထိ ကုလားဆိုပြီးအနှိမ်ခံနေရပြီးသား။ သူတို့ဘာသာကို ရစရာမရှိအောင် စော်ကားခံနေရပေမဲ့လည်း သူတို့ခံယူထားတာက သူများရိုင်းတိုင်းကိုယ်ပြန်မရိုင်း၊ သည်းခံနိုင်ခြင်းသည်မွန်မြတ်သာစိတ်ဓါတ်ဖြစ်သည်။ အများဆုံးတုန့်ပြန်ကြတာက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံ့ချခြင်း။ အဲသူတို့အထဲမှာတော့ ဂိုဏ်းကဏ္ဍတွေမတူလို့အချင်းချင်းသာပတ်ပြီး ရန်ဖြစ်နေတတ်မယ် အခြားဘာသာနဲ့ရန်ဖြစ်ခြင်းကိုရှောင်ကြတယ်။ လူနည်းစုဖြစ်နေလို့ အခြားဘာသာလူများစုနဲ့ရန်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း မူဆလင်မ်ပဲနစ်နာမှာပဲ။ စစ်အစိုးရကနိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခလုပ်ရင် မူဆလင်မ်ခေါင်းပုံချလို့လွယ်တယ်။ အရင်ကတည်းက လူမျိုးဘာသာသွေးထိုးပေးထားတဲ့မီးစာရှိနေတယ်လေ။ စစ်အစိုးရပါးစေတွေ သွားပြီး ဗလီတွေမီးရှို့ဖျက်စီး၊ မူဆလင်မ်အိမ်တွေ မီးရှို့လည်းလူနည်းစုမို့ဘာမှတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေး မြန်မာပြည်မှာကြီး တဲ့မူဆလင်မ်တွေဟာ လူမျိုးရေးအရအနှိမ်ခံထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်္ဓရွှေဝါရောင်အရေးအခင်းမှသံဃာတော်တွေ၊ တရုပ်-ဗမာ အရေးအခင်းတွေမှာစာနာမှုနဲ့ ကူညီကြတယ်။
တေးဆို : အယ်လွန်းဝါ
To listen http://www.imeem.com/rosebabe/music/5msh-XFc/a-chit-nat-a-pyit/
ညီအကိုချင်းတွေ မောင်နှမချင်းတွေ အင်္ဂါချင်းတွေဘဲ
မပြည့်စုံပေမဲ့ ထူးခြားနေတဲ့ မတူညီတဲ့အစွမ်းတွေရှိတယ်
လူ့ရဲ့တန်ဖိုး လူ့ရဲ့အရည်အချင်း ဘုရားပေးတဲ့ဘဝတစ်သက်တာနဲ့
အပြန်အလယ်နားလည် အကျင်နာတရားတွေ ကိုယ်တော်မေတ္တာနဲ့
အားနည်းချက် ရှိခဲ့လျှင် ခွင့်လွှတ်လျှက်ချစ်လိုက်ပါကွယ်......
*မပြည့်စုံပေမဲ့ ထူးခြားနေတဲ့ မတူညီတဲ့အစွမ်းတွေရှိတယ်
လူ့ရဲ့တန်ဖိုး လူ့ရဲ့အရေအချင်း ဘုရားပေးတဲ့ဘဝတစ်သက်တာနဲ့
ဘဝမှာ တစ်ခါတစ်လေ အမှားတွေလည်းကြုံမယ်
မှတ်ချက် : ခရစ်ယာန်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရှိလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေပါ။ အများစုကဆင်းရဲကြတယ်။ စစ်ဘီလူးမင်းလုပ်တဲ့ခေတ်မှာ ပြည်ပ သာသနာပြုမစ်ရှန်တွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုမျှော်ကိုးအားထားနေကြရတာပါ။ မြန်မာစစ်တတ်ဟာ ကရင်ရွာတွေ ဓါးပြတိုက်၊ ဖျက်ဆီး၊ ဘုရားကျောင်းတွေမီးရှို့၊ ကရင်မတွေကို မုဒိန်းကျင့် ရစရာကိုမရှိဘူး။ အဲဒီကနေသူတို့ဘဝဟာစစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းကိုရောက်တော့တာပဲ။ မုဒိန်းကောင်ဆိုတာ ခရိယာန်နဲ့မူစလင်မ်မဟုတ်ဘူး စစ်ဘီလူးတွေကြီးပဲ။ သူတို့လုပ်ခဲ့တာတွေ သူများကို အိုးမည်းပြန်သုတ်တာ။ စစ်သားဆိုတာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတကယ်နားလည်ကျင့်သုံးနေတာမဟုတ်ဘူး။ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ။ ဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားလိုက်နာရင် သူများပစ္စည်း၊ မိန်းမ၊ သားသ္မီးဖျက်ဆီးမှာမဟုတ်ဘူး။
၁) ဘုရားသားတော်သံဃာတွေကိုသတ်ပြီး လောကီသုခမှာပျော်မွေ့နေတဲ့လူတွေ၊ သံသရာ ဝဋ်ဆိုတာကိုမေ့လျော့နေပြီလား။
၂) ကျွန်ကုလားတဲ့လား။ စစ်ဘီလူးခေတ်မှာ သူများနိုင်ငံကိုအတိုးအဝှေ့ထွက်ပြီးကျွန်ခံနေတာ မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးလား။
၃) ကရင်၊ ကချင်၊ ချင်း အရိုင်းတွေတဲ့လား။ လူနည်းစုကို နှိမ်တာ၊နိုင်ထက်စီးနင်း ညှင်းပမ်းနေတာ ပိုမရိုင်းဘူးလား။
လူဆိုတာမွေးကလည်းကဘာမှမပါ၊ သေတဲ့အခါလည်းအပုပ်ကောင်ဖြစ်မှာ ဘာမှပါမသွားပါဘူး။
မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ သူများကြိုးဆွဲတိုင်း လိုက်က နေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဒီနေ့သက်သေပြဘို့လိုအပ်နေပါပြီ။ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေကိုဖယ်လိုက်ကြပြီး လူ့အရည်အချင်း၊ လူ့တန်ဖိုးအသိ အမှတ်ပြုပြီး ဘာသာတိုင်းစည်းလုံးနိုင်ကြရင် ငြိမ်းချမ်းမှုဟာမဝေးပါဘူး။
အွန်လိုင်းဘာသာရေးစော်ကားမှုတွေနဲ့ စာဖတ်သူတွေရဲ့နှလုံးသားလည်းမွန်းကျပ်ခဲ့ရပြီ။ အဲဒီဆူးကျိုးတွေကိုဖယ်လို့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကို အစားထိုးပြီး မိမိတို့၏ နှလုံးသားလေးကိုပြန်လန်းစေပါနော်။
Posted by ရောင်ခြည်ဦး (ဘာသာတိုင်းအတွက် အလယ်လူ) at 7:36 PM